Kukhona ikhono lokugcina izikhwama zakho ezinegama elikhulu - iDongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Ikhaya > Izindaba > Izindaba Zemboni > Kukhona ikhono lokugcina izikhwama zakho ezinegama elikhulu
Izinto ezahlukahlukene, sicela "unikeze umuthi ofanele" wokunakekelwa
Izikhwama zesikhumba ezingandile ezifana nesikhumba sengwenya, isikhumba sentshe, isikhumba sesibankwa, njll. Zidinga ukuhlanzwa ebusweni ngethawula elomile, bese zisetshenziswa kancane ngongqimba lwesikhanyisi sesikhumba ukukhulisa ukucwebezela kobuso besikhumba. Uma wenziwe ngezinto ezikhethekile ezifana ne-suede, i-suede, kanye noboya bezimvu, udinga ukusebenzisa ibhulashi lezinwele zezilwane elithambile ukuze ushanele ubuso besikhwama. Izinto ezibalulwe ngenhla akulula ukuzinakekela, ngakho-ke zama ukugwema ukunamathela ngokunamathela okuqinile kokudla noma upende; nokotini, indwangu nezinye izinto ezingcolile kalula, sicela ukhumbule ukungasebenzisi ibhulashi ukuyihlanza, okulula ukushiya amamaki nokungcola, bese uyisula ngethawula elihlanzekile nelimanzi Yiyeke yome ngokwemvelo. Kuyadingeka ukuthi unikeze umuthi ofanele ukwenza izikhwama zezikhwama zinakekele futhi zigcine zisondele.
Gcina "isimo sokuqala somzimba" sesikhwama
Noma ngabe yisikhwama esiyizinhlangothi ezintathu noma i-clutch ezintweni ezithambile, awukwazi "ukusiphonsa" ekhabethe ngentando. Ungagcina kanjani futhi ubeke izikhwama yisayensi. Wonke umuntu udinga "izinto zobuciko" ezimbili: izikhwama zothuli namabhola ephepha. Izikhwama ezibunjiwe zidinga ukufakwa ephepheni elifakwe shredhi ukuze zigcine "ukuma komzimba" Ngemuva kokuhlanza okuyisisekelo, sicela ukugoqe ngesikhwama esingenalo uthuli (sicela ungagcini izikhwama zesikhumba se-patent ezingxenyeni zepulasitiki), bese ekugcineni uzifake endaweni engena umoya kanye nasendaweni ethile Kwikhabethe. Phatha izikhwama ezithambile nezingabonakali ngaphandle kokungaqondakali. Zama ukungazihlanganisi izikhwama ezenziwe ngezinto ezithambile njengesikhumba semvu nesikhumba esithambile nezinto ezicijile. Ukuzilengisa noma ukuzibeka phansi ebhokisini lokugcina kuyisinqumo esihle. Uma uthola ukuthi isikhwama semali sinokusikeka noma imibimbi, vula isomisi sezinwele egiyeni elincane bese ushaya imibimbi ngobumnene.
Yenza izikhwama ezikhanyayo zikhanye futhi zingapheli
Zingaki izikhwama ezisikhanga ngemibala yazo emihle, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuvikela "ukubukeka" kwazo. Icala elikhulu elenza izikhwama zifiphale ukuvezwa yilanga. Indawo lapho kubekwa khona izikhwama kumele kufakwe umthunzi futhi kungeniswe umoya. Okwesibili, sicela usebenzise isifutho sePolish ukusula njalo. Uma ungabuyile, ungafaka ubisi noma i-glycerin ukugcina umbala. Ngokuqondene nesikhumba selungelo lobunikazi, izikhwama ezinombala okhanyayo okulula ukuzichaphaza, sicela uzame ukugwema ukuzihlanganisa nezingubo ezilula noma ama-solvent amakhemikhali.
Ungalokothi udedele ulayini wesikhwama
Kulezi zinsuku, izikhwama eziningi zikanokusho zifakwe ngezinto eziyigugu njengesikhumba esigcwele noma isikhumba sengwenya, ngakho-ke ngicela ungakunaki ukugcinwa kukalayini. Izimonyo noma ukudla okusesikhwameni kumele kuvalwe. Uma uyivuza ngengozi, izolimaza ulwelwesi lonke; kungcono ukubeka ipeni elivalekile esikhundleni sokucindezela ipeni lapho ufaka ipeni, ukuze "ungashayeki" kulayini ngemuva kokucindezelwa kwepeni. . Okokugcina, ngicela uzame ukugwema ukubeka izinto ezicijile ukuze ungaklwebheki ulwelwesi, ukuze isikhwama semali "sikwazi ukubukeka njengeso ngaphakathi nangaphandle."
Yenza izesekeli zezingxenyekazi zekhompiyutha zihlale zicwebezela
Izesekeli zehadiwe zezikhwama ezinamagama amakhulu ekuqaleni zazenzelwe ukunciphisa ukuhuzuka kwesikhumba sekhoneni. Eminyakeni yamuva nje, ziye zashintsha kancane kancane zaba yingxenye yokwakhiwa kwesikhwama. Izinto zehadiwe zigqwalile noma zithinta ukubukeka, ngakho khumbula ukuzisula njalo. Ngemuva kokuthi isikhwama sikhishwe yimvula, sisule ngethawula elomile ngesikhathi; uma ifakwe i-oxidized kancane noma igqwalile, ungayisula ngobumnene ngomuthi wokuxubha noma ufulawa. Ngaphezu kwalokho, gwema ukushayisana nezinto ezicijile lapho usebenzisa izikhwama ukugwema ukuklwebheka kuzinsimbi zehadiwe.
Ukugcinwa njalo kuyinto ebaluleke kakhulu
Okokuqala, ungafaki izinto ezisindayo esikhwameni, ngaphandle kwalokho isikhwama sizolahlekelwa ukwakheka kwaso ngokuhamba kwesikhathi. Okwesibili ukunaka ukunakekelwa kwesibambo. Ukuthintwa njalo ngesandla kwenza isibambo kube lula ukusigqoka futhi kuqoqele ukungcola. Gcina izintende zezandla zihlanzekile lapho uphatha isikhwama, noma ubopha isikhafu sikasilika esibambo ukugcina isibambo sihlanzekile. Okwesithathu, uma kunamathiselwe amabala, kufanele alashwe ngokushesha. Umuthi wokuxubha, utshwala noma okokuhlanza kungasetshenziselwa ukwelapha amabala okwesikhashana. Vele, ukugcina isikhwama esithile sokunakekela esikhwameni noma uwoyela wesondlo njalo yinkosi.
Vumela izikhwama nazo zijabulele ukunakekelwa kochwepheshe
Izikhwama zakudala zomkhiqizo omkhulu ezinezikhumba ezingavamile, inqobo nje uma zigcinwa kahle, azikwazi ukuthwalwa impilo yonke noma zidluliselwe esizukulwaneni esilandelayo. Iningi lemikhiqizo yokunethezeka inikezela ngesondlo samahhala sezikhwama zabo. Ngaphezu kwalokho, futhi ungathatha isikhwama sakho usise esitolo esisebenza ngobungcweti besikhumba ukuze unakekelwe ngokunethezeka nangokuphelele. Amasu obuchwepheshe kanye nemikhiqizo yesondlo ayikwazi ukulungisa izinkinga ezinzima njengokugqoka, ukuklwebha nokufiphala, kepha futhi yenza izikhwama Amafutha emvelo anciphayo ayalungiswa, enweba kakhulu impilo yesikhwama. Ngakho-ke ulindeni, iya ku- "4S shop" embonini yezikhwama ukuze wenze ubuhle "obuvuselela" izikhwama zakho!
Kwedlule:Ulwazi lokuthengwa kwemishini: amaqhinga amane wokukhetha ubhaka ongaphandle
Olandelayo:Ncoma amazinga aphezulu wesikhwama somama aphezulu